October 2021 - Babal Khabar
Oct302021 by बबाल खबरNo Comments
एक बालकले जब आफ्नो साइकलले कि’चे’को चल्ला र पैसा बोकेर अस्पताल पुगे !
हेर्नुस यो भिडियो, एजेन्सी । भारत मिजोरम राज्यका एक बालकको साइकलले दुर्घ'टनाबस कुखुराको एउटा चल्ला किच्यो । त्यसपछि जे भयो, त्यसले धेरै मानिसमा एकसाथ आश्चर्य, करुणा र मानवताको भाव पैदा गरायो । इन्डिया टाइम्स डटकमका अनुसार ती बालकले चलाएको साइकलले गल्तीबस छिमेकीको चल्ला किच्यो । त्यसपछि उनी आफूसँग भएको पैसा र चल्ला बोकेर तत्कालै नजिकैको अस्प'तालमा पुगे । जब त्यो तस्बिर फेसबुकमा पोस्ट भयो लगत्तै हजारौले सेयर गरे, जसमा सयौ प्रतिक्रिया जनाइयो । यो तस्बिर यतिखेर भारतका साथै धेरैतिर भाइरल बनेको छ ।यो पनि पढ्नुस : मेथीको साग सेवन गर्ने गर्नु भएको छ भने एकचोटी अवश्य पढ्नुहोला, यस्तो बन्दै छ मेथी सेवन गर्नेहरुको शरीर हिजोआज हरियो सागसब्जीले बजार भरिभराउ छ । रायोदेखि चम्सुर, पालुङ्गो लगायतका अनेकौ साग अहिले बजारभरी देख्न सकिन्छ । यस्ता सागसब्जी जति स्वादिलो हुन्छ, यसमा रहेको पौष्टिक त
दिनको ३ वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै मिल्नेछन् नपत्याउँदा फाइदा !
हेृनुस यो भिडियो, एजेन्सी । छोकडा अर्थात् ड्राइफुडको एउटा किसिम । अंग्रेजीमा date भनिने यो फलको अर्को नाम खजुर पनि हो । चाहे छोकडा भन्नुस् या खजुर, यो फल मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभकारी छ। कतिसम्म भने, तपाईंले दिनको ३ वटा छोकडा एक हप्तासम्म लगातार खानुभयो भने, त्यसले नपत्याउँदो फाइदा दिने गर्छ। त्यो फाइदाबारे जानेपछि पक्कै पनि तपाईंले यो नरम नरम, गिलोगिलो, गुलियो स्वादिलो फललाई आफ्नो नियमित आहारामा सामेल गर्नुहुनेछ । आउनुहोस्, छोकडाको नियमित सेवनले हुने फाइदाहरुबारे केही जानकारी हासिल गरौं। १. आन्द्राको क्यान्सरको जोखिम कम गर्छ: छोकडाको सेवन गर्दा हाम्रो आन्द्रामा फाइदाकारी व्याक्टेरियाहरुको बृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ के हो भने हाम्रो पाचन प्रणालीले राम्रो काम गर्न सक्छ। जब पाचनप्रणालीले राम्रो काम गर्छ, त्यसको अर्थ त्यहाँ हानिकारक किटाणुहरु पैदा भइरहेका छैनन्, खानेकुरा
Oct292021 by बबाल खबरNo Comments
महिलाले सधैं गोप्य राख्छन् यस्ता ७ कुरा, ती के हुन् ? थाहा पाइराख्नुस् !
पुरा खबर, तपाईलाई लाग्न सक्छ आफ्नी श्रीमती र प्रेमिकाले आफुलाई सबै कुरा बताउछिन् । तर तपाईंलाई उनीहरुले सबै कुरा बताइरहेकि हुदिनन् । सबै पुरुषले महिलालाई बुझ्न नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । उनीहरुले एकदमै गो'प्य राख्ने केहि कुराहरु हुन्छन् । केहि यस्ता कुराहरु छन् जुन महिलाले सधै गो'प्य राख्ने गरेको पाइएको छ । १. एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् रि'स गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्द्रर्य र स्टाइ'ललाई शरिरको फिगरबाट फि'दा हुने गरेको अध्यनले देखाएको छ । २. पुर्व प्रेमी प्रति महिलाहरुले आफनो पुर्व प्रेमीप्रति चासो राख्ने गरेको एक अध्यनले देखाएको छ । महिलाले उनको पहिलो ब्याइफे'ण्डसंग कुन केटीसंग अफे'यर चलेको छ । यो केटी आएपछि केटाको जीवनमा के परिवर्तन हुदैछ भने चियो चर्चा गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
पिताको १३५ कोठाको भव्य महल छोराले १४० रुपैयाँमा बेचिदिए…
पुरा खबर, काठमाडौं । पितासँग रिस उठेपछि एक युवाले आफ्नो पुर्ख्यौली महल मात्रै १४० रुपैयाँमा बेचिदिएका छन् । यी युवक राजपरिवारका सन्तान हुन् । यो परिवार जर्मनीको पूर्व राजपरिवार हो । छोराले मात्रै १ युरोमा भव्य म'हल बे'चिदिएपछि उनका ६६ वर्षका राजकुमार पिताले ३७ वर्षका छोरावि’रुद्ध अदा'लतमा मु’द्दा हालिदिएका छन् । जर्मनीको हनोवर सहरका राजकुमार अर्नस्ट अगस्टले आफ्नो १३५ कोठासहितको मेरिनबर्ग महल सन् २००० मा छोरा अर्नस्ट अगस्ट जुनियरलाई दिएका थिए । उनका छोरा अगस्ट जुनियरले २०१८ मा यो महल उचित मूल्यमा सरकारलाई बेच्ने घोषणा गरे । त्यसपछि अर्नस्ट अगस्ट जुनियरले यो महल मात्रै १ युरोमा बेचिदिए । उनले यो महलको मर्मतको लागि २७ मिलियन युरो लाग्ने र यति धेरै पैसा आफूसँग नभएकोले यो महल १ युरोमा बेचिदिएको बताए । द आर्ट न्युजपेपरका अनुसार अब महललाई बचाउन अर्नस्ट अगस्टले का'नुनको सहारा लिँदैछ
जानीराख्नुस !! यस कारण पुरुषहरु अत्याधिक दुखी हुने गर्दछन् !
यो भिडियो हेर्नुस, एजेन्सी । वैज्ञानिकहरुले गरेको एक अध्ययनले पुरुषहरु कुन समयमा खुशी हुन्छन् र के कुराले उनीहरुलाई सबैभन्दा धेरै दुःखी बनाउँदछ भन्नेबारे नयाँ तथ्य पत्ता लगाएको छ । १४ वर्षसम्म अमेरिकाका ६ हजार परिवारमा गरिएको यस अध्ययनले दुः'खपूर्ण भावनालाई चि'न्ता, पी'डा, नि'राशावादी, अस्ति'त्वहीन लगायतका नका'रात्मक भावनाका आधा'रमा मापन गरेको हो । यसबीच पुरुषहरु आफ्नो पत्नीको कमाइमा निर्भर हुनुपर्दा सबैभन्दा धेरै दुःखी र अस'न्तुष्ट हुने गरेको तथ्य पत्ता लागेको हो । अर्को तर्फ पत्नीले घरको ४० प्रतिशत आर्थिक भार सम्हाल्दा र बाँकी ६० प्रतिशत कमाइका लागि परिवार आफूमा निर्भर रहँदा चाहिँ सबै भन्दा खुसी हुने गरेको अनुस'न्धानले देखाएको छ । अध्ययनका अनुसार पुरुषहरु पूर्ण रुपमा पत्नीको कमाइमा निर्भर रहन चाँहदैनन् । तर आफू एक्लैले सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारी उठाउनाले पनि उनीहरुलाई खुसी
संसार लाई नै चकित पार्ने म’हिला जसको मु’टु नै छैन – यसरी बाचेकी छिन – तस्बिर र भिडियो सहित
हेर्नुस यो भिडियो, संसार लाई नै चकित पार्ने म’हिला जसको मु’टु नै छैन – यसरि बाचेकी छिन – तस्बिर र भिडियो सहित संसारमा कहिले काँही प्रकृतिलाई नै चुनौती दिने घ’टना हुन्छन् । तस्बिरमा देखिएकी खुशी हसिली महिला ‘सलवा हुसेन’ एक त्यस्तै महिला हुन । उनले प्रकृतिलाई नै चुनौती दिएकी छन् । उनी मुटु नभएकी संसारकी एक मात्र महिला हुन् । यो संसारको एक दुर्लभ घटना हो ।उनले आफु बाँच्नका लागि एक कृतिम मुटु लिएकी छन् । जुन शरिर भित्र छैन । उनले आफ्नो कृतिम मुटुलाई एउटा झोलामा राखेकी छिन । बेलायती अखबार डेली मेलले भन्यो कि 39 बर्षिय सलवा हुसेन एकमात्र यस्तो ब्यक्ति हुन , जो ब्रिटेनमा यसरी बस्छिन । उनी बिबाहित दुई सन्तानको आमा हुन, र सकेसम्म एक सामान्य जिबन बिताउने प्रयास गर्छिन, तर एउटा चुनौतिको साथमा । सलवा को ‘कृतिम मुटु’ एक झोलामा राखिएको छ, जसलाई उनी सधै आफ्नो काखमा राख्छिन । झोला सधैं उनिस
दुई वर्ष देखि कुनै पुरुषको नजिक नै नपरेकी यि महिला कसरी भइन् गर्भवती ? कारण थाहा पाउँदा परे सबै छक्क
हेर्नुस यो भिडियो, एजेन्सी । एक महिलाले गर्भावस्था को बारेमा अचम्म लाग्दो कुरा सार्वजनिक गरेकी छन् । ती महिला भन्छिन् कि उनी विगत दुई बर्षदेखि कुनै पुरुषसंग वे ड शे’यर गरेकी छैनन् । उनी एक्लै बस्दै आएकी छन् तर जब उनी डाक्टरकहाँ परिक्षणको लागी गइन्, डाक्टरले र ग त परीक्षणको हेरेर उनलाई गर्भवति भएको बताए । ‘द सन यूकेमा प्रकाशित समाचार अनुसार एक ब्रिटिश युवती सामन्था गि ब्स नले टिकटकमा एक भिडियो जारी गरेर एक आश्चर्यजनक कुरा सुनाएकी हुन् । उनी भन्छिन् कि जब उनी र ग त परीक्षणको लागी डाक्टरकहाँ गइन्, डाक्टरले उनलाई गर्भवती भएको बताए म यो सुनेर स्त ब्ध भएको थिएँ किनकि यो एक बर्ष भन्दा बढी भएको थियो म कसैसंग नजिक भएको छैन ।सामन्था गि ब्स नका अनुसार पुरुषको नजिक नै नपरेकी भएपनि डाक्टरहरुले उनलाई गर्भवती घोषित गरे। समाचारका अनुसार सामन्थाको यो भिडियो टिकटकमा १० लाख भन्दा धेरै पटक हेरि
पुरा खबर, काठमाडौं । हाम्रो समाजको भनाइ अनुसार आँखा फरफरायो भने कुनै घटना वा खबर प्राप्तिको संकेत हो । आँखाको फरफराई पनि महिला र पुरुषमा अलग–अलग तरिकाले विश्वास गरिन्छ । कुनै समाजमा पुरुषमा दाहिने आँखा फरफरायो भने शुभ समाचारको सूचक मानिन्छ भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचक मान्ने गरिन्छ। महिलामा भने देब्रे आँखा फरफरायो भने अशुभ समाचारको सूचकका रुपमा लिने गरिन्छ। तर, यो पूर्णत वैज्ञानिक कारणसंग जोडिएको कुरा हो। यसमा आँखाको परेला फरफराउँछ। यो फरफराई केही सेकेण्डसम्म या केही घण्टासम्म जारी रहन्छ। कसै कसैमा हप्तौंसम्म पनि जारी रहेको पाइन्छ। यस्त छन् आँखा फरफराउनुका कारण… सुख्खा आँखा : बुढ्यौली लाग्दै जाँदा अधिकांश मानिसले आँखा सुख्खा हुने समस्या भोग्छन्। कम्प्युटरको बढी प्रयोग गर्ने, एन्टिहिस्टामिन या एन्टिडिप्रेसान्टका औषधि बढी प्रयोग गर्ने, कन्ट्याक्ट लेन्स प्रयोग
यस्ता ७ काम गर्नुहोस्, जसबाट क्षण भरमै बन्न सकिन्छ करोडपति !
हेर्नुस भिडियो, ब्लग घरमा आरामले बसेर तपाई ब्लगबाट करोडौ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ । यसको लागी तपाइमा रचनात्मक लेखन क्षमता हुनुपर्छ । प्रख्यात वेबसाइट बिजनेस इनसाइडरको अनुसार सन् २०१६ साल ब्लगबाट पैसा कमाउनको लागि सबैभन्दा राम्रो स्रोत बन्यो । वायरलनोवा ब्लगको सुरुवात गर्ने सकॉट डीलांगले ८ महिनाको अवधिमै करोडौं कमाएका थिए । सबै पेजमा आउने गुगल एडको कारणले उनको आम्दानी धेरै बढेको थियो । यूट्यूब आजकलको समयमा बिना कुनै शैक्षिक योग्यता छिटो पैसा कमाउने सजिलो माध्यम बनेको छ यूट्यूब । यसका लागि तपाईमा छिन भरमै भाइरल हुनेवाला भिडियो बनाउने क्षमता हुनु आवस्यक छ । वर्ष २०१५-०१६ मा पिउडीपाई (जो गेमिंग भिडियो बनाउछन्) यूट्यूबबाट सबै भन्दा धेरै कमाइ गर्ने व्यक्ति बनेका छन् । प्रोफेशनल गेम्बलर यो तपाईको करियका लागि उपयुक्त माध्यम हुन्छ भन्न सकिदैन । तर, समयमै पैसा कमाउनको लागि तपाई अनलाइन पो
अध्ययन भन्छः स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा बढी खुसी हुन्छन् । यसरी ?
पुरा खबर, विवाह एक शाश्वत सत्य हो। विवाहको फल खाने पनि पछुताउँछ नखाने त झन् नपछुताउने कुरै भएन भनेर कहानी नै बन्ने गर्दछ। यो बिचमा विवाहलाई लिएर अनेक मान्यता रहँदै आएका छन्। विशेष गरी स्लिम केटीहरू आकर्षक हुने मान्यता रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो समय एक अनुसन्धानका अनुसार यो कुरा गलत रहेको प्रमाणित गरेको छ। अनुसन्धानका अनुसार अधिकांश पुरुषहरू मोटी महिला मन पराउँछन्। यस कारण कि, सबैभन्दा पहिला त मोटी केटीहरू श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन् र हरेक समयमा साथ दिन्छन् भन्नुको अर्थ सजिलै छोडेर जान सक्दैनन्। नेशनल अटोनान्मस यूनिवर्सिटी अफ मेक्सिकोले गरेको अध्ययनमा स्लिम केटीहरूको दाँजोमा मोटी केटीहरूसँग सम्बन्धमा रहेका पुरुषहरू धेरै खुसी हुन सक्छन्। अध्ययनमा भनिएको छ कि स्लिम केटीहरूको तुलनामा मोटी केटीसँग विवाह गर्ने पुरुष १० गुणा धेरै खुसी रहन सक्छन्। यस्ता महिलाहरू पुरुषलाई सिक्स प्याक